एजेन्सी । मेवा खानुले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ । तर, मेवाको पातको जूस विरलै कसैले पिएको सुनिन्छ । मेवाको पातको जूस यदी तपाईले पिउनु भएको छ भने राम्रो हो र यदी पिउनु भएको छैन् भने अब पिउन थाल्नुस् । विस्तृतमा
धनियाँका यी फाइदाहरु जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ
नेपालमा किड्नी फेलका समस्या बढी रहेको छ । मानिसहरु प्राय सोझै चिकित्सहरुका जानेभन्दा पनि बढी मेडिकल स्टोरमा गएर औषधी प्रयोग
थाहापाउनुहोस् ‘एस’ बाट नाम सुरु भएका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् !
अंग्रेजीको १९ औ लेटर ‘एस’ । किताबी ज्ञान बाहेक व्यवहारिक ज्ञानमा पनि ‘एस’ लेटरको महत्व रहेको बताइन्छ । ‘एस’ बाट नाम सूरु
दूध पिएलगत्तै भूलेर पनि नखानुहोस् यी चीज, लाग्नसक्छ यस्ता खतरनाक रोग
एजेन्सी । दूध क्याल्सियको स्रोत हो जसले हड्डि मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ । तातो दूध पिउनुका अनगिन्ति फाइदाहरु छन् जसले शरीरमा निखारता ल्याउन निकै सहयोग पु¥याउँछ ।
अमेरिकामा काम गर्नेहरुको यस्तो अवस्था !
डन्डीफोर आएर हैरान हुनुहुन्छ !
सुन्दर देखिने चाहना सबैको हुन्छ । तर, अनुहारमा आउने डन्डीफोरले त अनुहारलाई कुरुप नै बनाइदिन्छ । सुन्दर मुहारलाई कुरुप बनाउने डन्डिफोरलाई
मुटुबारे थाहा पाउनुहोस् यी अजबगजबका कुराहरु